BARADHADU WAXAY KU JIRAAN BACAHA: BEERASHADA IYO DARYEELKA EE TALLAABO TALLAABO AH - BARADHADA
Maanta waxaa jira habab badan oo loo kordhiyo khudraddaas. Sida ugu dhakhsaha badan oo aan la korin: habka caadiga ah, iyo qoryaha, iyo godad. Laakiin waxaa jira hab kale oo aan caadi ahayn - baradhada sii kordhaya ee bacaha.
Faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka dariiqa
Faa'iidada ugu cad cad waa keydinta beerta. Waxaad boorsada u gelin kartaa meel kasta oo leh nal ku filan. Ha ahaato meel ku taal jidka ama guriga hoostiisa dhinaca qoraxda: xaalad kasto, digriiga ayaa dareemi doona heer sare.
Habkani waa badbaado dhab ah oo loogu talagalay dadka degaanka xagaaga, sababtoo ah waxaad dooneysaa in aad soo saarto wax badan, laakiin ma jirto meel ku filan. Beerta dhaqameed ee khudraddaas waxay u baahan tahay meelo badan oo beerta, sababtoo ah waa mid macquul ah si loo beero yaanyada loo baahan yahay, qajaarka iyo strawberries halkii baradho.
Sidoo kale akhri waxyaabaha ku saabsan noocyada sii kordhaya ee baradho: "Luck", "Kiwi", "Irbitsky", "Gala".
Habkani wuxuu sidoo kale u sahlayaa in xagaaga degganaa ay ka shaqeeyaan marka la eegayo barkinta barafka uma baahnid hilling - kaliya ku rusheeyo digriiga leh ciidda jilicsan ee jilicsan. Geedaha sidoo kale ma kori doono barandhiga, sidaa darteedna uma baahna inay qodaan.
Geedka barandhiga ee bacaha leh dhulka ayaa ilaalin doona khudradda ka soo duudduubka Baradaabka Colorado, wireworm iyo phytophtoras, taas oo digriiga dhalinyarada ah ayaa aad uga baqaya in bannaanka u furan.
Haddii baradhada barafka ee Colorado muuqata on baradho, ka dibna waxaa la dagaalami karaa hababka dhaqameed, tusaale ahaan, isticmaalka khal iyo khardal, ama isticmaalka sunta cayayaanka: "Tanrek", "Regent", "Taboo", "Corado", "Calypso", "Confidor" , "Aktofit", "Aktara", "Decis".
Rot sidoo kale maaha mid cabsi leh khudradda, sababtoo ah biyuhu ma istaagaan, iyo carrada ayaa si fiican u kululeynaya. Isaga oo ka hadlaya faa'iidooyinka habkan, waa wax aan macquul aheyn in la xusuusto xaqiiqda ah in baradho u baahnayn in la qodo: waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso digriiga qallalan ee nadiif ah ee ciidda.
Dabcan, aan lahayn qaladaadka, kuwaas oo ugu muhiimsan yahay dhibaatada biyaha. Heerka qoyaanka waxaa loo baahan yahay in si joogto ah loola socdo loona hubiyo in la sameeyo tan iyadoo la adeegsanaayo waraabinta waraabka. Intaa waxaa dheer, ma ciidda kasta oo ku haboon habkan. Si aad u wanaagsan goosan waxaad u baahan tahay inaad bixiso iftiinka khudradda iyo ciidda dabacsan (tusaale, isku dar ah humus ama compost).
Qaababka helitaanka goosashada qani ku ah
Si si habboon loo beero baradhada bacaha, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo dhammaan talaabooyinka talaabo tallaabo.
Shuruudda ugu muhiimsan ee loogu talagalay meel ay ku jiri doonto weel khudaar, waa nalal ku filan. Waxaad bacda ku dari kartaa deyrkaaga dhinaca qorraxda, sariiraha ku xiga, ama xitaa haddii ay lagama maarmaan tahay: khudradda ayaa dareemi doonta meel kasta oo weyn.
Ma taqaanaa? Baradhadu waxay ka yimaadeen Koonfurta Ameerika. Baradhada digaaga ayaa wali ku koraya halkaa, laakiin dadku waxay sii kordhayaan khudradda cagaaran ee guriga muddo dheer.
Baradhadu waa la kori karaa awood kasta. Baakado kasta oo balaastig ah ayaa qaban doona. (laga bilaabo sonkorta iyo burka). Dhinacyada iyo qaybta hoose waxaad u baahan tahay inaad jeexjeexdo yar yar oo hawo siinaysa gudaha taangiga. Doorasho kale ayaa ah in la iibsado weelasha diyaarka ah ee loogu talagalay khudaarta sii kordhaysa ee dukaanka beerta. Waa in la ogaadaa in weelasha la soo iibsaday ay ku qalabeeyeen gacmo furan, iyo sidoo kale dareerayaal loo furan karo helitaanka hawada.
Bataashyada beeraha ee bacaha waxay u baahan yihiin tiknoolaji abuuris gaar ah. Heerkani wuxuu si fiican u bilaabmaa dabayaaqada Abriil iyo horraantii May, marka horeba heerkul aad u sarreeya oo banaanka ah.
Fududeynta, cidhifyada bacda waa la duubay, lakabka 10-35 cm oo daboolan oo nafaqo leh ayaa lagu shubay hooska. Waxaad diirin kartaa wax ka badan 3-4 baradho. Top ayaa u baahan in la buuxiyo lakabka dhulka ee 15 cm si ay u waraabiyo dalagyada.
Waa lagama maarmaan in la sugo soo ifbaxa sprouts 10-15 cm dheer iyo ku shub lakabka xiga ee carrada. Waa in aynaan ilaawin inaan si joogto ah u cabno khudaarta. Sidaa daraadeed, talaabooyinkan waa in lagu celiyaa ilaa bacda saddex-meelood laba meel buuxa.
Waa muhiim! Wadarta qoto dheer ee beerto waa in aan ka badnayn hal mitir, sababtoo ah haddii kale dhirta ma yeelan doonto awood ku filan si ay u quudiyaan dhammaan digriiga.
Sida loo daryeelo baradhada bacaha
Ka dib markaad qabateysid cuntooyinka kor ku xusan, baradhadu waxay u baahan yihiin oo keliya waraabinta. Laakiin waa in maskaxda lagu hayaa in uumiga qoyaanka qoyaanka ka soo baxa ay ka badan yihiin ciidda. Sidaa darteed, baradho waa in la waraabiyo had iyo jeer iyo si ka badan sidii caadiga ahayd. Diirad gaar ah waa in la bixiyaa siinta waraabinta inta lagu jiro ubax, marka digriiga ugu horreeya la sameeyay.
Bannaanka u khibrad leh talin cab biyo badan oo baraf ah sidaas darteed dhan lakab oo ciid ah ayaa la qallajiyey. Badanaa, hawo qaadashada hawada ku filan iyo dheellitirka biyaha oo dheellitiran ayaa noqda dhibaato marka khudaarta sii kordheysa. Haddii aadan ilaawin ku saabsan barxadda hoose ee taangiga, dhibaatadan ma soo baxayso.
Sida loogu talagalay nafaqada dhirta, fursadda ugu wanaagsani waxay noqon kartaa isticmaalka dhexdhexaad ah ee Bacriminta potash. Waxay leeyihiin saameyn faa'iido leh tayada iyo tirada dalagga.
Waa muhiim! Way ka fiican tahay in laga fogaado nitrogen, maxaa yeelay ma oggolaan doonto digriiga inay si deg deg ah u daadiyaan oo ay sameeyaan maqaar adag oo u oggolaanaya inay ku kaydiyaan khudradda waqti dheer mustaqbalka.
Waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado oo kaliya sida loo beeray baradho bacaha, laakiin sidoo kale sida si habboon loo soo ururiyo. Waxa ugu wanaagsan in la bilaabo goosashada laga soo bilaabo qeybtii labaad ee August. Waa ku filan inaad ku shubtid waxyaabaha ku jira weelka oo ka saar bataati cusub. Iyada oo tuber kasta oo la beeray waxaad ka heli kartaa qiyaasta kalluunka ee dalagga.
Ma taqaanaa? Sannadkii 1995, baradhadu waxay noqotey khudradda koowaad ee koray.
Dhammaan noocyada ma ku habboon yihiin koritaanka bacaha?
Khabiiro khibrad leh ayaa ku booriyay inay isticmaalaan beeritaanka noocyo kala duwan oo baradho ah, kuwaas oo siinaya digriiga ku filan oo waaweyn oo aan qabyo ahayn marka koray bacaha. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Bellarosa oo ka timid Jarmalka;
Sante oo ka socda Netherlands;
Svitanok Kiev iyo Slavyanka (xulashada guriga).
Waa muhiim! Baradhada koray ee ugu hooseysa bacda had iyo jeer waxay noqon doontaa mid weyn oo ka weynaato, halka miraha sare ay ku farxi doonaan dadka jecel khudaarta yar yar.
Sida gabagabeyn, waxaan dhihi karaa in baradho beerto ee boorsooyinka leh faa'iidooyin badan, iyo habkani waa in la isku dayaa in la isku dayey by bannaanka nooca. Waxaad ka badbaadin kartaa sariiraha sariiraha, oo uma baahnid inaad la dagaalanto cayayaanka baradhada. Baradhada ku jirta bacaha kaliya waxay ubaahantahay beeritaanka iyo daryeelka wanaagsan, oo aad ku baran karto isticmaalka fiidiyaha soo socda.